Breaking News : မိုးညှင်းမြို့တွင် လူရာနှင့်ချီပြီး ဆင်တုပ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်ပွားနေ
July 6, 2019 Cele Love 0
Breaking News : မိုးညှင်းမြို့တွင် လူရာနှင့်ချီပြီး ဆင်တုပ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်ပွားနေ ကချင်ပြည်နယ်တွင် မိုးညှင်းမြို့တွင် ဆင်တုပ်ကွေး ဖြစ်ပွားသူများပြားလျက်ရှိပြီး တစ်ရက်လျှင် လူနာ နှစ်ရာနှင့်အထက်ကို ဆေးဝါးကုသပေးနေရကြောင်း ယင်းမြို့ အထွေထွေဆေးရုံအုပ် ဒေါက်တာမြင့်ကျော်က ပြောကြားခဲ့ ပါတယ် …။ “ဆေးရုံမှာ အတွင်းလူနာတော့ မရှိပါဘူး။ ဓမ္မာရုံမှာ […]
“တစ်ပတ် အတွင်း (၁၀)ပေါင်ကျော်လောက် ၀ိတ်ကျစေမယ့် သခွားသီး Diet”
“တစ်ပတ် အတွင်း (၁၀)ပေါင်ကျော်လောက် ၀ိတ်ကျစေမယ့် သခွားသီး Diet” ၀ိတ်တွေ အရမ်းတတ်နေလို့ စိတ်ညစ်နေပြီလား.?၀ိတ်တော့ ကျချင်တယ် ဒါေ ပမယ့် အားကစားလုပ်ရမှာ ပျင်းတ ယ်ဆိုတဲ့ ပျိုမေတွေ အတွက် Diet Plan တစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ သခွားသီး diet ပါ။သခွား သီးဟာ ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ရော၊ […]
ချာလီဘ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး အထူးပြသပွဲကိုတက်ရောက်လာခဲ့တဲ့ မော်ဒယ် ဇွန်သဉ္ဇာ
ချာလီဘ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး အထူးပြသပွဲကိုတက်ရောက်လာခဲ့တဲ့ မော်ဒယ် ဇွန်သဉ္ဇာ July 6, 2019 အနုပညာလောက ဇွန်သဉ္ဇာ ကတော့ ဆက်ဆီမော်ဓယ် တစ်ယောက်အနေနဲ့အနုပညာလောကမှာ ရပ်တည်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ် …။ ဒီနေ့မှာတော့ ဇွန်သဉ္ဇာ ဟာ ချာလီဘ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး အထူးပြပွဲကိုတက်ရောက်လာ ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် … ။ […]
Victoriaလေးအမှု အပြင် လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ဒီသီလရှင်လေးသတင်းကို ဖတ်ပြီး ရှယ်သွားပေးပါနော်
Victoriaလေးအမှု အပြင် လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ဒီသီလရှင်လေးသတင်းကို ဖတ်ပြီး ရှယ်သွားပေးပါနော် ဥပဒေရေးရာလေ့လာသူနဲ့ ကျွမ်းကျင်သူအချို့ (အချို့)က victoria အမှုတရားဝင်သတင်းမထုတ်ခင်တုန်းကတော့ ” ဒါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း လုပ်နေကြတာပါ။ ဥပဒေအတိုင်းစစ်နေတာပါ။ လူတွေက စိတ်စောနေတာ။ စောင့်ကြည့်ပါဆိုတာ ” လို့ ပြောတာ လက်ခံသေးတယ် …။ အခု […]
“Victoria မေမေမျက်ရည်တွေနဲ့ပြောပြတဲ့ ခံစားချက်ကို ပြန်တွေးမိတိုင်း ရင်ထဲစို့နင့်မျက်ရည်ကျမိတယ်” ဆိုတဲ့ချစ်သုဝေ….
“Victoria မေမေမျက်ရည်တွေနဲ့ပြောပြတဲ့ ခံစားချက်ကို ပြန်တွေးမိတိုင်း ရင်ထဲစို့နင့်မျက်ရည်ကျမိတယ်” ဆိုတဲ့ချစ်သုဝေ…. ခေတ်၊သစ်တို့ရဲ့ မေမေချစ်သုဝေကတော့ ချစ်စရာကောင်းလွန်းလှတဲ့ သူမရဲ့အပြုအမူလေးတွေကြောင့် ပရိသတ်တိုင်းကချစ်နေရတာပါ။ ကလေးအမေလို့ထင်မှတ်စရာမရှိရလောက်အောင် နုပျိုလွန်းသူလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာလည်း ပီပြင်ကျွမ်းကျင်ရုံမကပဲ အဆိုဘက်မှာလည်း ပါရမီရှိသူတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်နော် …။ သူမဟာ လတ်တလောမှာဖြစ်နေတဲ့ နေပြည်တော်က ဗစ်တိုးရီးယားလေးရဲ့အမှုကိစ္စအတွက်စိတ်မကောင်းကြီးစွာဖြစ်နေရတာပါ။ သမီးလေးနဲ့ပက်သက်ပြီးတော့လည်း သူမတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်လုံးဟာ […]
ကွာရှင်းတဲ့သတင်းထွက်ပြီးနောက် ပထမဆုံးအကြိမ် ပရိသတ်အရှေ့ကို ထွက်လာတဲ့ SONG HYE KYO တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကျော်ထိပ်တန်းမင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ Song Hye Kyo ဟာ သူမရဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ Song Joong Ki နဲ့ ကွာရှင်းတော့မယ်ဆိုတာကို ပရိသတ်တွေအားလုံးသိထားပြီးသား ဖြစ်မှာပါ။ အိမ်ထောင်သက်တမ်း ၂ နှစ်ပတ်ဝန်းကျင်မျှသာ […]
Song Joong Ki ရဲ့ဖခင်ပြောပြလာတဲ့ Song-Song ကွာရှင်းမှုမှာ အပြစ်ရှိတဲ့ သူ
Song Joong Ki ရဲ့ဖခင်ပြောပြလာတဲ့ Song-Song ကွာရှင်းမှုမှာ အပြစ်ရှိတဲ့ သူ Song Joong Ki ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူ Song Yong Gak ဟာ သားဖြစ်သူ Song Joong Ki နဲ့ ချွေးမဖြစ်သူ Song Hye Kyo […]
YBS ၂ စီးပြိုင်မောင်းရာကနေ ၃ နှစ်နဲ့ ၆ လ အရွယ် ကလေးကိုတိုက်မိ၊ ကလေးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ ဖြစ်ရပ် ဇူလိုင်(၁) ရက်နေ့ ညနေ ၅ နာရီလောက်က အင်းစိန် ပေါက်တောဝအနီး ညောင်ပင်မှတ်တိုင်နား မှာ YBS နှစ်စီးပြိုင်မောင်း ရာကနေ တစ်စီးက […]
WISDOM HILL မူကြိုကျောင်းကို အပြီးတိုင်ပိတ်သိမ်းခိုင်းပြီး… အရာရှိများကို အရေးယူမည်… နေပြည်တော်၊ ဇူလိုင် ၅ (သတင်းတမန်) – အသက် ၂ နှစ်ကျော်မိန်းကလေးငယ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုကျင့်ခံရမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည့် wisdom hill မူကြိုကျောင်းကို ကျောင်းတည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့် ပေးတော့မည်မဟုတ်ကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးကပြောသည်။ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဇော်ဌေးက “တရားမ၀င်ကျောင်းဖြစ်နေတယ်။ အဲ့ကျောင်းကပိတ်ရမှာ။ လိုင်စင်တွေဘာတွေမပေးတော့ဘူး။ […]
တောင်းစားရမှာရှက်လို့ အမှိုက်ပုံက စားကြွင်းစားကျန်တွေကို တိတ်တိတ်လေး စားနေတဲ့ အဖိုး
တောင်းစားရမှာရှက်လို့ အမှိုက်ပုံက စားကြွင်းစားကျန်တွေကို တိတ်တိတ်လေး စားနေတဲ့ အဖိုး အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ အရှေ့ဂျာဗားစီရင်စု၊ Pasar Besar မှာ သနားစဖွယ်အဖိုးအိုတစ်ယောက်ဟာ သူများတွေဆီကနေ တောင်းစားရမှာ ရှက်လို့ထင်ပါရဲ့၊ လူသူကင်းတဲ့ အမှိုက်ပုံးရှိရာကို တိတ်တိတ်ကလေးသွားပြီး၊ ရသမျှလေးတွေ ခြစ်ခြုပ်စားသောက်နေရ ရှာပါတယ် …။ ဒီအဖြစ်ကို လမ်းသွားလမ်းလာတစ်ဦးက မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ပြီး၊ […]